Ugbu a enwere ụdị nke macOS Sierra 10.12.4 nwere Night Shift | Esi m mac
Ugbu a enwere ụdị nke macOS Sierra 10.12.4 nwere Night Shift
Izu gara aga anyị achọpụtala ya na nke a bụ izu nke anyị hụrụla mmalite nke sistemụ arụmọrụ maka Macs, macOS Sierra 10.12.4 ukara maka ndị ọrụ niile. Banyere ụdị ọhụrụ a nke ndị mmepe nwere 7 betas na nke ikpeazụ na naanị ụbọchị 3 nke ọdịiche dị n'etiti ha, anyị nwere ike ịsị na pụta ìhè na Night Mgbanwe mode na-abịa ketara n'aka iOS. O doro anya na a na-etinyekwa ndozi na nkwụsi ike na nchekwa nke usoro a na nsụgharị gọọmentị nke Apple wepụtara taa, mana anyị nwere ike ikwu ntakịrị ihe banyere akụkọ ahụ na nsụgharị ikpeazụ nke macOS Sierra 10.12.4.
Ọ bụ ezie na ọ bụ a ọhụrụ version mgbanwe ndị dị ụkọ, ma Olileanya e nweghị nchinchi ma ọ bụ nsogbu ruo mgbe ọhụrụ version na ọ bụ na ihe niile beta tọhapụrụ na mbụ ma ọ bụrụ na e nwere chinchi ọ ga-abụ nnọọ ihe ihere. N'aka nke ozo obu eziokwu na a na-anwale nsụgharị beta nke mmadụ ole na ole karịa nsụgharị ikpeazụ ma ndị a nwere ike ịdaba na kọmputa ụfọdụ, ma na ụkpụrụ ihe niile ga-achịkwa.
Nhapụ a na-atụ anya ka ndị obodo niile nwee nsụgharị beta niile, mana ọ nweghị onye nwere ike ikwenye na anyị ga-enwe nsụgharị ikpeazụ ruo oge nke mmalite ahụ, nke dị na nke a emeelarị. Ya mere nkwanye ugbu a bụ imelite Mac gị ozugbo enwere ike ma ị nwere ike ime ya ozugbo site na ịnweta mmelite taabụ na Mac App Store. Ozi ọ bụla anyị hụrụ na ụdị a nke a na-ebipụtaghị, anyị ga-eso gị kerịta, mana n'ụkpụrụ o yighị ka enwere mgbanwe na beta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Sierra » Ugbu a enwere ụdị nke macOS Sierra 10.12.4 nwere Night Shift
O nyela m nsogbu ... Ma enweghị m ike ịchọta ihe ngwọta ... Anaghị m eji nkwụnye Ethernet Thunderbolt. Emechara m si na Internetntanetị site n'otu ụbọchị gaa na nke ọzọ… naanị WiFi
Zaghachi Arturo Ávila
Enweghị m ike ibudata faịlụ ọ bụla ọ gwara m na njikọ ahụ agbajila, biko nyere m aka ka m rụọ ọrụ
Ọ na-enye m mmeghe na foto and ..na m gbanwekwara asụsụ mgbe m na-abanye paswọọdụ
Nnọọ!! Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka, emelitere m sistemụ arụmọrụ yana mgbe ijikọ igwe ikuku m 11 na smart TV site na eriri ọ na-ewepụta onyonyo desktọọpụ, amaghị m ihe m kwesịrị ịme iji mee ka ọ rụọ ọrụ dị ka ọ na-emekarị
Zaghachi PAULA ANDREA VALENCIA MORALES
Carlitos Vasquez - Nkem Nwankwo dijo
Enwere m mac mini (mbubreyo 2014) nke nwere ụdị nke 10.12.3 nyere m ọdịda ọdịda jọgburu onwe ya mgbe m laghachiri ezumike, ọ dị ka ihuenyo pink pixelated, ọ were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sekọnd atọ ka ọ kwụsị ma ọ bụ ihe mkpasu iwe ugbu a na mmelite kwụsịrị nsogbu ahụ.
Zaghachi Carlitos Vasquez
Ọ dị mma, gịnị ka m ga-agwa gị, enwere m mac mini (mbubreyo 2014) na ụdị nke gara aga nyere m nsogbu ihuenyo jọgburu onwe ya mgbe m hapụrụ ụra, ugbu a ka m melite ya anaghịzi eme.
Apple weputara usoro ikpeazụ nke watchOS 3.2 na tvOS 10.2 maka onye ọ bụla
Bumpr, imeghe njikọ na ihe nchọgharị anyị họọrọ ugbu a dị mfe